Nuxurka Kulan Shalay Dhex Maray Xisbiga WADDANI Iyo Siyaasiyiinta Garabka Isbahaysiga KULMIYE Iyo Magacyadda Masuuliyiinta Shirka Ka Qayb Galay |
Nuxurka Kulan Shalay Dhex Maray Xisbiga WADDANI Iyo Siyaasiyiinta Garabka Isbahaysiga KULMIYE Iyo Magacyadda Masuuliyiinta Shirka Ka Qayb Galay
Waxa shalay kulan xasaasi ah oo ay albaabadu u xidhnaayeen hotel Ambassador ee magaalada hargeysa ku yeeshay siyaasiyiinta ku bahoobay garabka is bahaysiga KULMIYE iyo masuuliyiinta xisbiga WADDANI kuwaasi oo mudooyinkii u danbeeyeyba wada hadalo u socdeen.
Waxaana kulankan laga hadlay sida ay shabakada Ramaasnews u shegeen ilo wareedyo u dhuun daloola xisbiga sidii uu u qabsoomi lahaa shirwaynaha xisbiga WADDANI iyo waliba dhamaystirka heshiiska ay siyaasiyiintu hor keeneen masuuliyiinta xisbiga WADDANI ee wada hadalkooda.
Garabka siyaasiyiinta Isbahaysiga waxa shirka uga qayb galay wasiirkii hore ee arimaha dibada Somaliland Maxamed Biixi Yoonis,Wasiirkii hore ee cadaalada Xuseen Axmed Caydiid iyo waliba wasiirkii hore ee madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan,dhanka kale xisbiga WADDANI waxa shirka uga qayb galay gudoomiyaha xisbiga WADDANi Cabdiraxmaan Cirro,Xoghayaha Xisbiga mudane Uur Cadde.
Xogahani waxay noo shegeen in labadan dhinacba ay kala saxeexdeen heshiisyo hor leh iyada oona la filayo in ka hor qabsoomida shirwaynaha xisbiga loo qabto siyaasiyiintan xaflad lagu soo dhawaynayo garabkan kasoo cadhooday xisbiga KULMIYE iyo cududooda taageero ee ay wataan.
Qodobada lagu heshiiyay ee labadan dhinac kala saxeexdeen ayaa wali la shaacin .